Montolivo: Waxaanu Qoomamaynaynaa Inaanu Ka Hadhnay Europa League
Kabtanka kooxda AC Milan ee Riccardo Montolivo ayaa si qiiro leh uga hadlay guuldarada naadigiisa kala soo daristay koobka labaad ee ugu xiisaha badan qaarada Yurub ee Europa League oo naadiga Clarence Seedorf ka hadheen.
Milan ayaa ciyaartii u dambeysay ee horyaalka ka doonaysay celcelis xisaabeed u suurto galliya ka mid noqoshada lixda kooxood ee ugu sareeya horyaalka Talyaaniga si ay uga qayb gasho, laakiin in kastoo ay kaga adkaadeen naadiga Sassuolo 2-1, hadana natiijadii ka soo baxday ciyaartii dhex maraysay kooxaha Parma iyo Torino ayaa ka dhigtay inay kaalinta 8 aad ee horyaalka ku dhamaystaan.
“Qoomamo weyn ayaa nala soo daristay taas oo naga timid ka hadhidii aanu ka hadhnay Europa League, mana aha mid aanu qarin karno,” ayuu ku yidhi jariidada Mediaset Premium.
“Kulankii ugu dambeeyey horyaalka, waxaanu xooga saarnay sidii aanu ugu gudbi lahay Europe, laakiin kala sarayntii ayaa nala hadhay.”
Montolivo ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey mustaqbalka tababare Clarence Seedorf kor uga baxay oo diiday inuu wax ka yidhaahdo kuna booday dareenkiisa ka qayb galka xulka talyaaniga ee Koobka aduunka tagaya.
“Aniga ima khusayso inaan ka hadlo mustaqbalka Seedorf. Shaqo fiican baanu qabanay intii uu nala joogay , waxaanan isku daynay inaanu kor isu soo qaadno. Imika waxaan ka fikirayaa koobka aduunka, oo aan rajaynayo in Italy Mucjiso ka dhigi doonto.”
Goolal ay u kala saxeexeen Nigel de Jong iyo Sulley Muntari ayaa Milan u horseeday guul ay San Siro ku gaadho, laakiin naadiga Rossoneri ayaa gebgebadii ciyaarta laba ciyaaryahan dibada laga dhigay , kadib markii kaadhka cas la siiyey.
AS Roma Oo Si Rasmi Ah Ula Soo Wareegtay Ashley Cole
Real Madrid Oo 4-1 Ku Karbaashtay Manchester City, Kuna Guuleystay International Champions Cup
Anderson Oo Ka Fikiraya Halkii Uu Uga Wareegi Lahaa Old Trafford
War Cusub: Donald Trump Oo Saami Ka Iibsanaya Kooxda Inter Milan
Marek Hamsik “Xitaa Dhagxaantu Way Ogyihiin Inaan Ku Faraxsanahay Kooxda Napoli”
7 Arimood Oo Laga Yaabo Inaadan Ku Aqoon Iceland